Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Jamie Vardy Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Anyị Jamie Vardy Biography na -ewetara akụkọ gbasara akụkọ nwata ya, ndụ nwata, nne na nna, eziokwu ezinụlọ, nwunye, ụmụaka, ndụ onwe onye na ụdị ndụ ya.
N'okwu dị mfe, anyị na -ewetara gị nyocha zuru oke nke Akụkọ ndụ ya, malite na Jamie Vardy's Early Days ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Ee, onye ọ bụla maara nke a 'Fox ngwa ngwa' (aha ya) bụ otu n'ime ndị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ n'ọgbọ ya. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Jamie Vardy bụ nke na-atọ ụtọ, Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Akụkọ Jamie Vardy Childhood Akụkọ:
A mụrụ Jamie Richard Vardy n'ụbọchị 11th nke Jenụwarị 1987 na Sheffield, United Kingdom. A mụrụ ya nne ya, Lisa Vardy (onye bụbu onye ọka iwu na -arụ ọrụ), na nna ya, Richard Gill (onye bụbu onye ọrụ crane).
Jamie tolitere n'ezinụlọ ndị na-eto eto ma biri na nwata mgbe ọ na-etolite na Hillsborough.
Ebe Jamie Vardy tolitere. Ebe E Si Nweta DreamTeamFC.
Akụkọ nwata ya bụ ngosipụta nke ahụhụ, ntachi obi mgbu na mmeri. Ọ bụ akụkọ 'Rags-to-Riches' nke onye na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ nke ghọrọ dike n'egwuregwu bọọlụ.
Ịhụnanya Jamie maka ịgba bọọlụ bịara na mbido nwata ya. Gị, mkpebi ya ịgba bọọlụ dị ka ọrụ bịara n'oge ọ dị afọ iri na ụma.
Ndị mụrụ ya kwadoro mkpebi ya itinye uche na ya na ọ nweghị ihe ọ bụla, ọbụlagodi agụmakwụkwọ tụfuru, ka emechara, ọ nwere ike ịsụ na ide Bekee.
Jamie Vardy Biography - Afọ mmalite:
Ọchịchọ Jamie Vardy maka ịgba bọl mere ka ọ malite ịgba bọọlụ n'oge ọ dị obere. Ná mmalite, nrọ Jamie Vardy ga -egwu bọọlụ kacha elu. Nrọ a, ọ dị nwute, nwụrụ ka Sheffield Wednesday mere ihe a na -atụghị anya ya.
Ụlọ ọrụ ahụ wepụtara jamie Vardy na mgbakwasị na ọ bụ obere obere taa. Gị na Little Jamie dị ka e gosipụtara n'okpuru ebe a weere ya dịka onye dịkarịrị nta na onye ọkpụkpụ n'etiti ọgbọ ya.
Akụkọ a jụrụ ajụ mere ka nwatakịrị ahụ nwee iwe na mgbagwoju anya. Ọ bụ ihe ijuanya n'ihi na Sheffield Wednesday abụrụla ọgbakọ ọ kwadoro ndụ ya niile dịka nwatakịrị.
Jamie Vardy Bio - Okporo Ụzọ Ebube Akụkọ:
Ọjụjụ Sheffield United jụrụ mere ka Vardy ghara ichetụ n'echiche bọọlụ. N'ịchọ ichefu bọọlụ kpamkpam, Vardy weere ọrụ ụlọ ọrụ na-akwụ obere ụgwọ ebe ọ na-ebi ndụ. Jamie Vardy kwuru n'otu ajụjụ ọnụ;
"Abụ m onye na-eji ụrọ carbon. Ọrụ m gụnyere ịme ndị na-arịa ọrịa nkwụsị ụkwụ. Anyị ga-ebuli elu ọkụ ọkụ. Anyị na-ebuli ihe ọtụtụ narị ugboro n'ụbọchị, ọ na-emebikwa azụ m. "
Akụkọ gosiri na Jamie na-arụ ọrụ 12 awa na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ ya.
Mgbe ọ na-arụ ọrụ maka ụlọ nrụpụta ahụ, ọtụtụ ndị ọrụ Jamie Vardy maara na ọ bụghị oku ya. O were nnukwu mgbalị maka onye guzoro ọtọ wee bịakwute ya.
Jamie Vardy kwenyesiri ike na onye ọrụ ibe ya na enyi ya nyere ya ndụmọdụ ka ọ nye football ohere nke abụọ.
Jamie Vardy Biography - Bilie na Akụkọ Ama:
Dabere na DreamTeam FC, ọ bụ nanị mgbe ọ dị ka Vardy ka a ga-ekpe ya ikpe na ọ gbanwere ndụ ya n'ihi mkpebi ya ịhapụ ụlọ ọrụ Carbon Fiber ma laghachi na football.
Mgbe Jamie tinyeghachiri echiche siri ike n'ime ya, Jamie laghachiri n'inyocha otu osisi ọ na-atụ anya na ya ga-anabata ya. Oge a, otu akụkụ dị ala 'Wickersley Ntorobịa na Rotherham ' nyere ya ohere.
Na -atọ ọchị etu oge si aga. Ihe dị ka afọ 5 ka nke ahụ gachara na June 2016, ụfọdụ Jamie Vardy ka na -egwu egwu maka nkeji nke asaa nke bọọlụ Bekee na -enweta kilogram 30 abụrụla onye njide Premier League na onye mgbaru ọsọ kacha elu.
Nwunye Jamie Vardy na ụmụaka:
Na Jamie na-ebili ka a ma ama, ajụjụ a na-ekwu banyere onye ọ bụla bụ… isnye bụ enyi nwanyị Jamie, nwunye ma ọ bụ WAG?. Ọ bụ Rebeka onye a mụrụ na 7th nke February 1982 (afọ 5 karịa nwoke ya).
Foto nke Rebeka. Ebe E Si Nweta The Independent.
Vardy zutere nwunye ya Ribeka Nicholson na 2014 mgbe ọ na -arụ ọrụ dị ka onye nkwalite ụlọ oriri na nkwari abalị.
Akụkọ ịhụnanya malitere na 2014 mgbe Vardy goro Rebeka ịhazi oriri ụbọchị ọmụmụ ya. Ọkụ ịhụnanya na -efe efe mgbe enyere nzaghachi atụmatụ ụbọchị ọmụmụ na ndị ọzọ, dịka ha na -ekwu, ghọrọ ịhụnanya.
Ndị enyi abụọ ahụ gbara akwụkwọ maka afọ abụọ tupu ha alụọ na 26th nke May, 2016 na ama ama ama ama ama aha Peckforton Castle na 26 May 2016,
Ha niile nwere ụmụ atọ dị ndụ. Jamie Vardy nwere ụmụ ya abụọ (Sofia Vardy,
na Finley Jaiden Vardy mụrụ na 2014 na 2017 n'otu n'otu) site na nwunye ya mgbe otu site na mmekọrịta mbụ.
Ụmụ Ribeka nwere mmekọrịta ya na mbụ:
Ribeka nwekwara nwa nwanyi na nwa nwoke aha ya bụ Megan na Taylor, ndi edere ya na 13 na 8 n'otu oge (na March 2019). Megan na Taylor na-egosi mgbe niile na akaụntụ Instagram ha.
Iemụ Jamie Vardy si na mmekọrịta ya na mbụ:
Jamie Vardy nwere nwa nwanyị aha ya bụ Ella Vardy, onye a mụrụ na 2010, ya na enyi ya nwanyị bụ Emma Daggett.
Jamie Vardy Ndụ nkeonwe:
Jammata Jamie Vardy Personal Life ga-eme ka ị nweta nkọwa zuru ezu banyere ya. Malite na, Jamie bụ nwoke ọrụ ebere nke hụrụ n'anya nye onyinye maka ọha na eze maka ihe kpatara football. Jamie malitere ulo akwukwo V9 ya na November 2015.
V9 bụ mmemme ịma ụlọikwuu kwa afọ nke Jamie mepụtara iji nye ndị egwuregwu bọọlụ na-abụghị ndị otu ọzụzụ na nduzi.
Ebumnuche a na-enye ndị egwuregwu bọọlụ a ohere pụrụ iche iji gosipụta nka bọọlụ ha n'anya nke ndị na-ahụ maka egwuregwu Premier nke mbụ.
Jamie Vardy bụ ọrụ ebere n'ihi na ọ maara na e nwere ọtụtụ ndị si n'ebe ahụ ka na-agbasi mgba ike inweta ohere igwu egwu n'ogo.
Jamie Vardy Ndụ Ezinụlọ:
Vardy na-egosiputa nne na nna ya na ezinụlọ na-arụ ọrụ nwere nnukwu uru nye ya. Agbanyeghị, mmekọrịta ya na ezinụlọ ya abụbeghị nke gara nke ọma n'afọ ndị na -adịbeghị anya.
Ị maara?… Jamie Vardy esorola nne ya (Lisa), nna nna (Phil), na nne na nna ochie daa ozugbo na mkpebi ya ka ya na Becky Nicholson biri. Ezinaụlọ ya akwadoghị nwa agbọghọ nkwalite ụlọ oriri na nkwari abalị, Becky.
Nkwenye ha na-akwadoghị maka nwunye ya mere ka nkewa daa n'etiti Jamie Vardy na ndị mụrụ ya nke mere ka ha ghara ịga agbamakwụkwọ ya. Ọbụna nne na nna ochie Jamie Vardy bụ Gerald na Mavis na-efu n'ihi mgbagha ezinụlọ.
Jamie Vardy LifeStyle: Nkem Nwankwo
Dabere na Legit, Onye isi oche onye isi oche nke Leicester mepere ụzọ ndụ ọjọọ Jamie Vardy.
O kwukwara na ọ chọghị ka klọb bịanye aka na Vardy site na ngalaba Bekee dị ala. Aiyawatt Srivaddhanaprabha nwere echiche a n'ihi agwa mmanya Jamie Vardy.
Amaghị m ihe a ruo mgbe mmadụ gwara m na ya bịara ịzụ ọzụzụ mgbe ọ drunkụbigara mmanya ókè. O kwuru na ya amaghị ihe ọ ga-eji ndụ ya mee. Jamie enwetụbeghị nnukwu ego. ” Srivaddhanaprabha kwuru.
Mgbe otu okwu siri ike gasịrị, Vardy kpebiri ịgbanwe ụzọ ya. Ọ kwụsịrị ịṅụ mmanya ma malite ịrụ ọrụ siri ike n'ịzụ ihe.
Eziokwu Jamie Vardy:
Gaa na Thai Monk:
Ụfọdụ ndị na -agba bọọlụ boro Jamie Vardy ebubo na ọ nwetara ike bọọlụ Chineke n'aka ndị mọnk Thai ndị mere njem 6,000 kilomita site na Thailand ruo Leicester.
Ọtụtụ kwenyere na nke a bụ ihe kpatara ọganiihu ya n'oge oge 2015/2016 nke ndị otu ya meriri Premier League.
Jamie Vardy nwere ọsọ kachasị elu nke Premier League nke kilomita 22 kwa elekere maka oge egwuregwu nke 2015/2016. N'okpuru ebe a bụ vidiyo nke ihe ịtụnanya Jamie Vardy. Ebe e si nweta ya OTU NKE MBA.
Ozugbo A Na - akpọ Egwu Ọgwụ:
N'ọnwa Ọgọstụ 2015, a na -ekiri Jamie Vardy na cha cha na -eme nnukwu mmejọ nke ndị egwuregwu kọwara dị ka 'agbụrụ agbụrụ'. Ihe a mere mgbe a hụrụ Jamie Vardy ugboro ugboro na-akpọ onye East Asia onye 'enye'.
-'Ịkpọ mmadụ aha a na -abụkarị mmejọ -. N'agbanyeghi mgbaghara maka ikpehie ikpe na-ezighi ezi, Jamie kwusiri ma tinye ya na nkuzi nkuzi nke ndi ozo site na Leicester City FC.
Ozugbo gara na Parole:
Ị maara?… N'afọ 2007, a mara Jamie Vardy ikpe maka mwakpo mere na mpụga ụlọ mmanya. Nke a mere ka ọ gbaa bọọlụ n'okpuru ọnọdụ siri ike.
Anya na -ele anya site na ndị mmanye iwu Britain rụrụ ọrụ dị ka onye uwe ojii parole ya. O mere ka Jamie yi mkpado elektrọnik nke dabara n'ahụ ya ruo ọnwa isii.
Na mgbakwunye na nke ahụ, iwu machibidoro ya oge ọ na -alọta site na iwu nke rụrụ ọrụ ịdọ aka na ntị. Nke a gbochiri oge egwuregwu bọọlụ ya dịka ọ na -ejigide n'ọtụtụ oge.
Daalụ maka ịgụ edemede a na Vardy. Ndị otu anyị gbara mbọ maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ ka anyị na-etinye Akụkọ nwata na Eziokwu banyere ndu nke Leicester obodo Fast Fox.
Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a na Jamie, biko nweere onwe gị ikwurịta ya na ngalaba nkọwa.